Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | JW.ORG
KU AKHRI Acholi Afrikaans Ahanta Aja Albanian Albanian Sign Language Amharic Arabic Arabic (Jordan) Arabic (Lebanon) Arabic (Syria) Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Attié Aukan Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bariba Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Bengali Betsimisaraka (Northern) Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bomu Bosnian Boulou British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Zimbabwe) Chichewa Chilean Sign Language Chin (Falam) Chin (Hakha) Chinese (Traditional) Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cibemba Cinamwanga Croatian Croatian Sign Language Czech Dagaare Dangme Danish Dari Drehu Dutch English Esan Estonian Estonian Sign Language Ewe Fante Fara Hadalka Itoobiya Faroese Fataluku Fijian Finnish Finnish Sign Language Fon Frafra French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Guerze Gujarati Gun Guéré Haitian Creole Hausa Haya Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kalanga (Zimbabwe) Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kisi Kongo Konkani (Devanagari) Konkani (Roman) Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Laotian Latgalian Latvian Latvian Sign Language Lingala Lithuanian Logo Lovari Low German Luganda Luo Macedonian Madura Mahorian (Roman) Maithili Makasae Malagasy Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mam Mambae (Ermera) Mambwe-Lungu Mandinka Mandjak Mangbetu Maninkakan (Eastern) Mapudungun Marathi Mauritian Creole Mazahua Mende Meru Mingrelian Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Huasteca) Nambya Ndali Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nepali Sign Language New Zealand Sign Language Newari Ngangela Nigerian Pidgin Niuean Nivaclé Norwegian Nyaneka Nzema Obolo Oromo Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papel Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pehuenche Pemon Pennsylvania German Persian Piaroa Pidgin (Cameroon) Pidgin (West Africa) Pilagá Polish Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quebec Sign Language Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quechua (Huaylla Wanca) Quichua (Imbabura) Quichua (Santiago del Estero) Rapa Nui Rarotongan Romanian Romany (Albania) Romany (Argentina) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Romania) Runyankore Russian Rutoro Sango Saramaccan Sarnami Sehwi Senoufo (Cebaara) Sepedi Serbian Serbian (Roman) Serer Setswana Seychelles Creole Shiinaha Mandarin (Fudud) Shona Shughni Sidama Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Soomaali Spanish Sranantongo Susu Svan (Lower) Svan (Upper) Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tiv Toba Tojolabal Tok Pisin Tongan Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Voru Wallisian Welsh Wichi Wolof Xhosa Yoruba Yukpa
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo Cookieska
Ururka Markhaatiyaasha Yehowah xog dhowridda dadka way ixtiraamaan. Haddii ad warbixin ka rabtid Siyaasadda Ilaalinta Xogta oo caalamiga ah ee ururka ku dhufo halkan.
Siyaasadda Ilaalinta Xogta waxay sharaxdaa waxay ururka Markhaatiyaasha Yehowah xogta dadka ku sameeyaan. Si dheeraad ahna hoos waxaa lagu soo bandhigay tilmaamo websitekan ku saabsan oo aan hirgelinay.
Websitekan waa hantida Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) oo ah shirkad New York oo bilaa faa’iido ah oo taageerto Markhaatiyaasha Yehowah hawlahooda iyo waxbarashada Kitaabka Quduuska ah. Qaar ka mid ah severrada websiteka waxay ku sugan yihiin Mareykanka.
Xogta ad u gudbisid websiteka looma adeegsado si ka geddisan habka lagu tilmaamay markaad codsigaaga gudbisay.
Xogtaada qof kale ma siinayno haddii aysan fulinta codsigaaga kallifin ama haddii aan kuu sheegno ama haddii aan aamminsan nahay inuu sharcigu kallifo ama booliiska ay codsadaan ama sidaan u ogaanno oo u joojinno dhibaatooyinka ku saabsan musuqmaasuqa iyo dhowridda websiteka iyo sancad habeynta. Markaad websitekan isticmaashid waxaad yeeshay inaan xogtaada shakhsi kale u bixin karno sababaha kore daraaddood keliya. Xaalad walba ha dhacdo xogtaada la ma iibin doono mana la beecmushtari doono oo la ma kireyn doono.
Websiteyada Kale. Marmar websitekan waxaad ku aadi kartaa websiteyo kale oo aan adeegsanno (matalan buuxinta foomamka online). Markuu qoraalka kore beddelmo oo waxaad u jeeddid si kale noqdaan website kale baad ku jirtaa. Sidaan u hubinno inay websiteyada kale isku heer haystaan markaan dooranno iyo kaddibba siyaasadahooda ilaalinta xogta iyo arrimaha khaaska ah waan iska baadhnaa. Haddii ad su’aalo ka haysatid siyaasadaha websiteyada kale eeg siyaasadda websitekooda soo bandhigay.
Dhowridda xogtaada aad bay muhim inoogu tahay. Markii xogtaada la gudbinayo waxaan ku dhowrnaa barnaamij sir ah sida Transport Layer Security (TLS). Waxaan ka taxaddarnaa qarsoodinimada iyo dhowridda xogta naloo soo gudbiyay. Waxaan isticmaalnaa kombiyuutarro dad yar geli karaan oo ku jiro meelo aad loo ilaaliyo.
Markaad akoon ka samaysatay websitekan emailka ad ina siisay waxaa loo isticmaali doonaa sida lagu la soo xiriiro. Matalan haddii ad illowdid magaca ama eraygaaga sirta ah ad ku soo gashid akoonkaaga oo ad ina weyddiisatid caawimaad, emailkaaga baan farriin kugu soo diri doonaa sidaan kuu caawinno.
Haddii ad online inoogu sadaqeysatid magacaaga iyo xogtaada xiriirka baan kaydin doonnaa. Sidaan u helno sadaqo kaarka deynta lagu sameeyay waxaan adeegsanaa websiteyo rasmi ah oo lacagta lagu gudbiyo. Websiteyadan siyaasadda dhowridda iyo xog ilaalinta dunida ugu fiican bay haystaan. Ma kaydino mana arki karno xogta kaarkaaga deynta ama xogta iyo lambarka akoonkaaga bangiga oo ad u soo dirtay websiteyadan. Toban sanadood bay kuwa sadaqada helo diiwaangelin doonaan lacagta loo soo diro. Waxaa la diiwaangelin doonaa taariikhda sadaqada la sameeyay, qiimaha la sadaqeeyay iyo habka loo sadaqeeyay. Tani waxay nagu caawin doontaa inaan xeerka xisaabta oofino oo aan suʼaal ka dhiibno jawaabaha ad waqtigaas ina weyddiisid. Kula ma soo xiriiri doono sidaan sadaqo dheeraad ah kaga codsano.
Ka sokow sadaqo iyo akoon sameysi waxaa jiro sababo kale ad xogtaada (sida magacaaga, cinwaankaaga iyo lambarkaaga) inoogu soo gudbin kartid (matalan sidaad u codsatid dhigashada Kitaabka). Xogtan sababta keliya aan u ururino, u kaydino una adeegsano waa sidaan u fulino codsigaaga. Waqti ka badan inta loo baahan yahay ma haysan doono.
Cookies iyo Sancooyin la Mid ah
Markaad websitekeenna booqotid xog gooni ah baan si otomaatig ah u ururinaa. Sidaan u kaydino xogtan waxaan adeegsanaa “Cookies,” “web beacons” iyo sancooyin la mid ah. Qaanuunkan arrimaha khaaska ah kelmedda cookie si ballaaran baan ugu isticmaalnay oo waxaa ka tirsan micnaheeda sancooyin la mid ah sida “local storage.”
Cookies. Websiteyada badankood sidooda oo kale markaad websitekan booqatid xog yar oo loo yaqaanno “cookie” baa telefoonkaaga, qalabkaaga ama kombiyuutarkaaga ku kaydismo. Waxaa jiro cookies badan oo kala cayn ah oo haddana sameeyo hawlo kala duwan oo badankood isticmaalka websiteka wanaajiya. Cookies waxaan u adeegsan karnaa sidaan u ogaano inaad websitekeenna mar hore booqatay ama sidaan u xusuusano waxyaalaha ad dooratay. Matalan luqadda ad dooratay baan ku ururinaa cookie siday luqaddaas kugu soo baxdo markaad websiteka dib u booqatid. Cookies xayaysiin uma isticmaalno.
Cookieska websitekan lagu isticmaalo saddex nooc bay u kala baxaan:
Cookies Aan Laga Maarmin​—Cookieskan aad bay muhim u yihiin sida lagugu aqbalo inaad websiteka qaar ka mid ah isticmaashid sida gelitaanka akoonkaaga ama diridda foomamka. Cookieskan laʼaantood waxyaalaha ad codsatay sida bixinta sadaqada lama fulin karo. Cookieskanna waxaa ka tirsan cookies inoo fasaxo inaan oofino codsi gaar ah ad sameysay markaad websitekeenna ku jirtay. Cookieskan lagu ma ururiyo xogtaada sida ganacsi loogu isticmaalo mana lagu xusuusto waxyaalaha ad Internetka ka eegtay.
Cookieska Shaqaynta Websiteka​—Cookieskan websiteka bay u oggolaadaan inuu si fiican kugu shaqeeyo oona xusuusto doorashada ad sameysay (matalan magacaaga gelitaanka, luqaddaada, iyo meesha ad ku sugan tahay).
Cookieska Baadhitaanka​—Cookieskan waxaa lagu kaydiyaa xog ku saabsan siday dadka websitekan u isticmaalaan sida inta goor oo websitekan la soo booqdo iyo waqtiga lagu jiro. Xogtan waxaa loo isticmaalaa keliya in lagu waanjiyo siduu websiteka u shaqeeyo.
Cookieska qaarkood waa cookieska websitekeenna kuwa kalena waa cookies websiteyo kale. Annaga waxaan isticmaalnaa cookieska websitekeenna keliya. Marka keliya aan cookieska websiteyada kale adeegsano waa markaan Google reCAPTCHA ku xaqiijinayno inuu isticmaalaha yahay qof oona kombiyuutar ahayn. Tani waxay joojisaa diritaanka emailo fara badan oo otomaatig ah oo aan waxtar lahayn. Google qaanuunkooda arrimaha khaaska ah ka eeg https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
Web Beacons. Bogagga websitekeenna waxaa ku kooban faylal yar oo loo yaqaanno web beacons. Faylalkan waxay diinwaangeliyaan isticmaalka websiteka matalan booqoshada bogagga goonida ah ee websiteka. Web beaconska waxay la socdaan isticmaalka websitekan iyo waxqabadkiisa.
Iticmaalka Cinwaanka IP. Cinwaanka IP waa lambar kombiyuutarkaaga internetka laga aqoonsado. Cinwaankaaga IP iyo nooca browserkaaga waxaan u isticmaalnaa inaan baadhno qaabka websiteka loo isticmaalo iyo dhibaatooyinka websiteka iyo sidaan adeegsigiisa kugu wanaajino.
Goʼaankaaga. Browseryada badnaantood waxay aqbalaan inaad iska bakhtiisid cookies ama inaad digniin ka heshid intuunan cookie ku kaydsamin qalabkaaga. Akhri tilmaanta browserkaaga sidaad u ogaatid habka loo sameeyo. Haddaba ogow inaad cookies laʼaantood adan websitekan si dhammaystiran uga faaʼiidaysan karin.
Qoraalka kombiyuutarka waxaa loo adeegsadaa inuu wanaajiyo habka uu websiteka u shaqeeyo. Isticmaalka sancadda qoraalkan waxay kuu oggolaataa inaad si dhaqsi ah u isticmaashid websitekan. Qoraalka kombiyuutarka weligiis loo ma isticmaalo in barnaamijyo la geliyo kombiyuutarkaaga ama in la ururiyo xog adan inoo fasaxin.
Waa bilaa lacag markaad websitekan isticmaashid oo wargeysyo, fiidiyowyo iyo maqal download gareysatid. Sidaad websiteka uga faa’iidaysatid uma baahnid inaad akoon furatid, wax sadaqeysid ama inaad xogtaada bixisid. Haddaba haddii ad dooratid inaad akoon furatid, wax sadaqeysid, dhigashada Kitaabka Quduuska ah codsatid ama wax kale sameysid sidaad xogtaada u bixisid waxaad aqbashay Qaanuunkan Arrimaha Khaaska ah iyo Cookieska; xog ku kaydin severro Mareykanka ku yaal; Watchtower iyo ururyo waddammo kale oo Markhaatiyaasha Yehowah taageero inay xogtaada ururiyaan, habeeyaan, gudbiyaan oona kaydiyaan markay u baahdaan siday codsigaaga u fuliyaan. Meesha xogta lugu ururiyo waxay ku xiran tahay waxaad websiteka ka sameynaysid. Matalan haddii ad urur sharci ah oo waddan ku yaal u sadaqeysid magacaaga iyo xogtaada ururkan baa loo diri doonaa. Ururkaas waxaa lugu sheegi doonaa intaad ku hawl jirtid sadaqada. Masaal kale haddii ad dhigashada Kitaabka Quduuska ah codsatid sida codsigaaga loo fuliyo magacaaga iyo xogtaada Markhaatiyaasha Yehowah laan ka mid ah baa loo diri doonaa.
Codsigaaga ma fulin karno haddii adan xogtaada dhiibin markaad akoon furatid, wax sadaqeysid ama si kale websiteka uga faa’iidaysatid iyadoo xogtaada loo baahan yahay.
Haddii aan u baahanno inaan beddelno Qaanuunkeenna Arrimaha Khaaska ah iyo Cookieska boggan baan ku soo bandhigi doonnaa sidaad mar walba ula socotid xogta aan ururino iyo sidaan u isticmaalno.
Sharciga wuxuu oggolaan karaa xuquuq kale oo xogtaada ku saabsan. Tani waxaa ka tirsanaan kara xaqa ad ku eegtid, ku saxdid ama ku tirtirtid xogta ad websitekan inoogu soo dirtay. Haddii sharciga waddankaaga waxan waafaqsan yahay xogta xiriirka halkan baad ka heli kartaa. Haddii uu codsiga xogtaada ku saabsan yahay sadaqo ad bixisay la xiriir kuwa ad u sadaqeysay oo lugu sheegay markaad ku hawl jirtay sadaqada oo kuna qoran rasiidhkaaga.